Ithegi: Amaqela eMicrosoft | Martech Zone
Ithegi: Amaqela eMicrosoft
Njengoko iinkampani ziqhubeka nokusebenza ekhaya, inani leentlanganiso ezibonakalayo sele linyukile. Ndiyamangaliswa ngenani leentlanganiso apho umbonisi enemicimbi enokwabelana ngePowerPoint Presentation kwiscreen. Andizishiyi kule nto… ndiye ndahamba amaxesha ambalwa apha endleleni kwaye ndalibazisa ukuqala kwe-webinar ngenxa yemicimbi endiyifakileyo. Useto olunye olugqibeleleyo, nangona kunjalo, oluqinisekisa ukuba lusetiwe kwaye lugcinwa ngayo yonke i-intanethi
Ukusebenza kwentengiso kubalulekile kulo naliphi na ishishini elikhulayo. Ngeqela lokuthengisa elibandakanyekayo, baziva bekhuthazekile kwaye benxibelelene neenjongo zombutho kunye neenjongo zabo. Impembelelo ezimbi zabasebenzi abangasebenziyo kumbutho zinokubaluleka-njengokungabikho kwemveliso, kunye nokuchitha italente kunye nezixhobo. Xa kufikwa kwiqela lokuthengisa ngokuthe ngqo, ukungabikho kothethathethwano kunokuxabisa amashishini kwingeniso ethe ngqo. Amashishini kufuneka afumane iindlela zokubandakanya amaqela okuthengisa, okanye umngcipheko